Fenotiana 17 taona : mitantara ny fahafaham-barakany voalohany
Reny maodely, mpandraharaha matihanina Anisan’ireo vehivavy mpandraharaha tena be herim-po Razakanavalona Bakoly, tompon’ny Poissonnerie Manda ( anaran-janany), orinasa iray mpikirakira ny resaka hazan-dranomasina eto amintsika. Ny taona 1995 no niaingany voalohany tamin’io sehatra io ary mbola iainany sy ivelomany mandraka androany. Anisan’ny nanampy azy betsaka tamin’izany ny mahazanaka mpanarato azy...
« Gel douche intime », tena ilaina ve ?
Faritra tena saro-pady eo amin’ny vehivavy ny fivaviana, ka tokony ho ara-dalàna ny hadiony. Mbola maro amintsika vehivavy anefa no misalasala amin’ny fomba fisasa tena mety. Inona marina no antony liana ireny “gel intime” ireny ?
Mikarakara tarehy ve ianao isan’andro?
Inona no mahasorena anao indrindra amin’ny toetran’ny vehivavy ?
Tokony hiera amin’ny lehilahy ve ny vehivavy raha hanova zavatra amin’ny vatany ?
Mitsena azy isan’andro any am-piasany, mety ve?
Face à face Efa nahavanon-doza noho ny fitiavana ve ianao ? Tantarao !
Tadidiko tsara, journée des écoles tamin’izay.
Nanao « balle » izahay tamin’izay, tao amin’ny Lycée nianaranay. Nisy lehilahy nahafatifaty ahy izay, efa nanana “sipa” izy fa tsy nanakana ahy hitsiriritra azy izany. Nitopy maso taty amiko izy dia faly be aho, nidobodoboka be ny foko. Dia nandeha ho azy ny « charme »-ko, nitsikitsiky be ery sady nivoara-mena mihitsy ! Nisy fotoana amin’izay, hira “slow” no nandeha dia nanatona naka ahy handihy izy… Hay ilay sipany no tao aorianako tao ary ilay sipany no halainy hiara-handihy taminy. Saika tsy hitako izay nasiako ny tenako ! Ilay izy niresaka tamin’ny namany izany, mety ho nifosa ahy fotsiny ! Nandeha nivoaka avy hatrany aho fa tena menatra. Hatramin’izao, mbola tsy mety afaka ao an-tsaiko iny fotoana naha-afa-baraka ahy tanteraka iny.